Nagu saabsan - Yantai Jietong Teknolojiyada Daaweynta Biyaha Co., Ltd.
Yantai Jietong Teknolojiyada Daaweynta Biyaha Co., Ltd.oo ku takhasusay daaweynta biyaha warshadaha, biyo nadiifinta biyaha, nidaamka koloriinta elektroonikada, iyo warshadda bullaacadaha, waa xirfadle cusub oo tiknoolajiyad sare ku takhasusay la tashiga dhirta daaweynta biyaha, cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta. Waxaan helnay in kabadan 20 ikhtiraac iyo sheybaar, waxaana ku guuleysanay aqoonsiga nidaamka maaraynta tayada heerka ISO9001-2015, nidaamka maareynta deegaanka ee caadiga ah ISO14001-2015 iyo nidaamka maareynta caafimaadka iyo badbaadada shaqada OHSAS18001-2007.
Waxaan u hoggaansameynaa ujeeddada "Sayniska iyo Teknolojiyada hage ahaan, Tayada badbaadada, Dhibcaha Horumarinta", Waxaan soo saarnay kow iyo toban taxane ah oo ah 90 nooc oo ah alaabooyinka biyaha lagu daweeyo, kuwaas oo qaar kamid ah loo xushay inay yihiin badeecado loogu talagalay PetroChina, SINOPEC iyo CAMC. Waxaan bixinay nidaam baaxad weyn oo elektrolysis ah si looga hortago xaalufka biyaha badda ee warshadda korontada ee Cuba iyo Cumaan, iyo waxay siisay mashiinada biyaha saafiga ah biyo nadiif ah oo loogu tala galay Cumaan, taas oo ka heshay qiimeyn sare macaamiishayada qiime tartan iyo tayo leh, Mashaariicdeena daaweynta biyaha waxaa loo dhoofiyay aduunka oo dhan, sida Korea, Iraq, Saudi Arabia, Kazakhstan, Nigeria, Chad, Suriname, Ukraine, India, Eritrea iyo dalal kale.
Shirkadda Horumarinta Taariikhda
Awoodda Naqshadeynta Waaxda Farsamada
Laga soo bilaabo 2011, shirkaddu waxay si buuxda u bilawday barnaamijka 'Sliodworks software 3D 3D platform design design'. SOLIDWORKS naqshadeynta 3D ee xasaasiga ah iyo xalalka horumarinta wax soo saarka waxay uur qaadi karaan, abuuri karaan, xaqiijin karaan, xiriiri karaan oo maamuli karaan fikradaha hal-abuurka leh, waxayna u beddelayaan fikradaha hal-abuurka ah naqshadaha wax soo saarka wanaagsan. Kahor soosaarka wax soo saarka, adoo tijaabinaya wax soosaarka adduun dalwaddeed, injineeradu waxay si wax ku ool ah u qiimeyn karaan waxqabadka, hagaajinta tayada, una dardargelin karaan hal-abuurka wax soo saarka.
Iyada oo loo marayo qaabka 3D, si wanaagsan loola xiriiro macaamiisha sheyga, si dhakhso leh uga jawaab baahiyaha macaamiisha, iyo is dhaafsi fikradaha wax soo saarka iyo naqshadaha macaamiisha. U adeegso xogta naqshadeynta 3D si aad u iibiso alaabooyin cusub adigoo kaashanaya turjumaad macquul ah iyo nuxurka AR iyo VR, xogta wax soo saarka 3D ayaa la bixiyaa si loo hubiyo soosaarka saxda ah ee dukumiintiyada kormeerka, buugaagta isticmaalaha oo tayo sare leh iyo dukumintiyada aqoon isweydaarsiga. Koox qaabeyn heer sare ah ayaa diirada saaraya bixinta xalalka guud ee dadka isticmaala biyaha adduunka.
Sifeeyaha Roorka Biyaha Nadiifinta, Geedi socodka macaaneynta, Ro Water Filter Qaybaha Dayactirka, Nidaamka Sifeeyaha Xirfadlaha, Biyaha Badaha Si Loo Cabbo Mashiinka Biyaha, Naqshadeynta Nidaamka Nidaamka 'Sodium Hypochlorite',